Sakafo Breziliana - Mampihena mora foana, mahomby ary matsiro
Ny sakafo Breziliana dia andriamanitra fotsiny ho an'ireo olona izay tsy afaka misakafo amin'ny sakafo matsiro. Ohatra, miaraka amin'ny hena, atody ary trondro. Mazava ho azy, ny fihinanan-tsakafo dia misy fetrany, saingy tsy dia misy dikany loatra toy ny amin'ny sakafo henjana sy ny rafitra fihinanan-kanina.
Noho izany, raha mbola tsy nanapa-kevitra ny hanina ianao, nefa miaraka amin'izay dia te hihinana ianao, dia aza misalasala misafidy ny sakafo Breziliana.
Ny mahatsara sy maharatsy ny sakafo Breziliana
Ny sakafon-tsakafo dia tena tia vehivavy mijanona ao an-trano ary tsy miasa. Mampientanentana ny fahatsorana sy fahatsorana amin'ny fahandroana sakafo. Ary farany nefa tsy azo odiantsy, tsy mila mandany vola be amin'ny fivarotana enta-mavesatra ianao. Azonao atao ny mividy azy ireo ao amin'ny supermarket akaiky anao.
Alohan'ny hanapahanao hevitra amin'ny famoahana sakafo dia mila manatona dokotera ianao, satria ny sakafonao dia misy contraindications manokana.
Azonao atao ny manapa-kevitra samirery ny faharetan'ny sakafo. Ny sakafo Breziliana dia natao mandritra ny tapa-bolana na efatra herinandro. Ny fanampin-tsakafo iray hafa dia ny hoe tsy mila mamorona menio ianao. Efa voalahatra ho an'ny faharetan'ny sakafo rehetra. Hanamora ny fiainanao izany ary hitsitsy fotoana.
Ny sakafo Breziliana dia sakafo proteinina gliosida ambany, mihena kely ny fihinanana kaloria isan'andro.
Fitsipika momba ny sakafo sy menus ho an'ny sakafo
Mila mihinana sombin-javatra ianao. Midika izany fa tsy tokony ho latsaky ny efatra ny isan'ireo sakafo isan'andro. Tsara kokoa raha misakafo in-dimy ianao.
Ny sakafo dia heverina ho henjana sy henjana, na dia mihevitra ny zava-misy fa hihinan-kena sy atody. Tsy ampirisihina hanova ny sakafo any amin'ny toerana ianao ary hanolo ny sakafo sasany ho an'ny hafa, satria raha tsy izany dia mety tsy hahatratra ilay vokatra irina ianao.
Breziliana sakafo dia manolo-kevitra fa izay zava-manitra sy sakafo hafa mety hanimba ny filanao dia tokony hesorina amin'ny sakafonao. Fady koa ny mihinana hena mifoka, lovia mamy ary lovia masiaka. Ny legioma dia tokony haverina mandritra ny sakafo. Raha mihinana azy ireo ianao amin'izao andro izao, dia ilaina ny manilika ny mofo amin'ny sakafo.
Mandritra ny sakafo dia tsy maintsy mihinana vitamina C ianao, fa tsara kokoa ny misafidy vitaminina sarotra ho anao, miaraka amin'ny dokotera. Aza adino koa ny misotro ranon-javatra betsaka.
Ny fifantohana dia ny sakafon-tsakafo, lasopy maivana, legioma, voankazo ary anana. Avela hisotro rano mineraly tsy misy gazy tsotra na ranom-boankazo.
Ao anatin'ny tapa-bolana miaraka amin'ny sakafo toy izany dia mety ho very dimy kilao ianao. Diniho ny menio santionany izay harahinao mandritra ny sakafonao. Ity dia fizarana henjana kokoa amin'ny sakafo, izay misy proteinina - atody, hena ary trondro - ho fototry ny sakafo.
Menu sakafo Breziliana
Sakafo maraina: atody nandrahoina iray, paoma vaovao iray, kafe voajanahary iray vera.
Ny sakafo atoandro sy ny sakafo hariva dia hitovy: paoma vaovao iray ary atody nandrahoina iray.
Sakafo maraina: atody roa nandrahoina.
Sakafo atoandro: hen'omby nandrahoina zato grama, epinara kely.
Sakafo hariva: atody nandrahoina iray ary epinara.
Sakafo maraina: atody nandrahoina iray.
Sakafo atoandro: trondro nandrahoina zato grama ary voatabia salasalany.
Sakafo hariva: atody roa nandrahoina sy kafe voajanahary iray vera.
Sakafo maraina: atody nandrahoina iray sy kafe voajanahary iray vera.
Sakafo atoandro: trondro an-dranomasina nandraho zato grama ary voatabia kely iray.
Sakafo hariva: trondro nendasina zato grama sy salady legioma.
Sakafo atoandro: henan-omby nandraho zato grama, kôkômbra antonony ary kafe voajanahary iray vera.
Sakafo hariva: henan'omby nandrahoina roanjato grama, kafe voajanahary iray vera.
Sakafo atoandro: akoho zato nandrahoina nandrahoina tsy misy tavy sy hoditra, kôkômbra antonony ary voatabia salasalany.
Ny sakafo hariva dia mitovy amin'ny sakafo atoandro. Tokony hisotro kafe voajanahary iray vera fotsiny ianao.
Famaranana ny sakafo Breziliana
Araka ny hitanao dia henjana ny menio ary sarotra be ny mitazona sakafo toy izany. Noho izany, alohan'ny hanapahanao hevitra amin'ny fihinanana sakafo dia eritrereto tsara raha afaka maharitra hatramin'ny farany ianao. Raha tsy izany dia mety hanimba ny fahasalamanao ianao ary tsy hahazo ilay tarehimarika tadiavina.
Misy karazany hafa amin'ny sakafo Breziliana izay mifantoka amin'ny voankazo, legioma, anana ary ranom-boankazo. Saingy henjana ihany koa ny menio azy, na dia tsy maintsy mihinana farafahakeliny dimy isan'andro aza ianao.
Aza adino fa ny fanatanjahan-tena antonony dia tena mahasoa ny fahasalamanao, indrindra mandritra ny sakafo, rehefa mihena ny lanjanao ary manjary malemy ny hoditrao.
Prev Sakafo rano - Very 5 kg tsy misy fihenjanana
Manaraka Ny momba ny filomanosana amin'ny fihenan'ny lanja rehetra
81 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,756.